Umkhiqizi Nomhlinzeki Wamagumbi AseChina | Xinneng
Igumbi elibandayo linikezwa yikhasimende ngobude obudingekayo, ububanzi, ukuphakama nokushisa kokusebenzisa. Sizoncoma elihambisana ebandayo ekamelweni panel ukujiya ngokusho lokushisa ukusetshenziswa. Igumbi elibandayo lokushisa eliphakeme neliphakathi ngokuvamile lisebenzisa amapaneli ayi-10 cm awugqinsi, futhi isitoreji esiphansi sokugcina kanye nokugcina iqhwa ngokuvamile kusebenzisa amapaneli ayi-12 cm noma ayi-15 cm ubukhulu. Ubukhulu bepuleti lensimbi lomkhiqizi ngokuvamile lingaphezulu kuka-0.4MM, futhi ukuminyana kwegwebu kwephaneli legumbi elibandayo kungu-38KG ~ 40KG / cubic meter ngemitha ngayinye engamamitha ayi-cubic ngokwezinga likazwelonke.
Igumbi elibandayo linikezwa yikhasimende ngobude obudingekayo, ububanzi, ukuphakama nokushisa kokusebenzisa. Sizoncoma elihambisana ebandayo ekamelweni panel ukujiya ngokusho lokushisa ukusetshenziswa. Igumbi elibandayo lokushisa eliphakeme neliphakathi ngokuvamile lisebenzisa amapaneli ayi-10 cm awugqinsi, futhi isitoreji esiphansi sokugcina kanye nokugcina iqhwa ngokuvamile kusebenzisa amapaneli ayi-12 cm noma ayi-15 cm ubukhulu. Ubukhulu bepuleti lensimbi lomkhiqizi ngokuvamile lingaphezulu kuka-0.4MM, futhi ukuminyana kwegwebu kwephaneli legumbi elibandayo kungu-38KG ~ 40KG / cubic meter ngemitha ngayinye engamamitha ayi-cubic ngokwezinga likazwelonke. Ifektri izokwakha iminyango enobukhulu obuhlukahlukene ngokuya ngezidingo zamakhasimende, imvamisa ubukhulu bendlu ejwayelekile bungu-0.8m * 1.8m. Uma ikhasimende lingenayo usayizi oyifunayo, sizophinde sibe nosayizi ojwayelekile wegumbi elibandayo amakhasimende azowakhetha.
Iphaneli yegumbi elibandayo le-polyurethane isebenzisa i-polyurethane engasindi njengokwangaphakathi kwephaneli legumbi elibandayo. Ubuhle be-polyurethane ukuthi ukusebenza kokufakwa kokushisa kuhle kakhulu.Ngaphandle kwephaneli yegumbi elibandayo le-polyurethane lenziwe nge-SII, ipuleti lensimbi yombala we-PVC nezinsimbi zensimbi engagqwali ipuleti.Inzuzo yalokhu ukuvimbela ukusabalala kwamazinga okushisa emakhazeni Igumbi lepaneli ngenxa yomehluko omkhulu wokushisa phakathi kwangaphakathi nangaphandle, ngaleyo ndlela lenza igumbi elibandayo longe amandla futhi lithuthukise ukusebenza kahle kwegumbi elibandayo.
Izici zePolyurethane Cold Room Panel
1. I-polyurethane eqinile ine-conductivity ephansi yokushisa nokusebenza okuhle okushisayo.
2. I-polyurethane eqinile iqinisekisa umswakama futhi ayinamanzi.
3.Umlilo oqinile we-polyurethane, ukuvimbela ilangabi, ukumelana nokushisa okuphezulu.
4. Ngenxa yokusebenza okuhle kakhulu kokufakwa okushisayo kwamapaneli e-polyurethane, kunganciphisa ukushuba kwemvilophi yokwakha futhi kwandise okungaphakathi.
5.Ukumelana okuqinile nokusonteka, akulula ukuqhekeka, ukuqina okuzinzile nokuphephile.
6. I-polyurethane material inesakhiwo se-porosity esizinzile futhi ngokuyisisekelo isakhiwo se-cell evaliwe, esingenawo nje kuphela ukusebenza okuhle kakhulu kwe-thermal, kepha futhi sinokumelana okuhle kweqhwa nokuncibilika komsindo ..
7. Ukusebenza okuphelele kwezindleko
Ukucaciswa kobukhulu bepaneli yethu yekamelo elibandayo le-polyurethane yilezi: 75.100.120.150.180, 200MM yokukhethwa. Izinto eziphambili zokuzivikela yilezi: ipuleti le-aluminium embossed, ipuleti lensimbi engagqwali, ipuleti lensimbi yombala we-zinc, ipuleti lensimbi enosawoti, kanye nensimbi esezingeni eliphansi. Sivame ukusebenzisa embossed aluminium ipuleti nensimbi engagqwali ipuleti.
Imininingwane Yephrojekthi Yegumbi Lesifriji:
Ubude Ububanzi Ukuphakama I-CBM Ithempelesha Ubuningi
Ikhava yensimbi yePhaneli
Insimbi yombala, Insimbi engagqwali, Lashukumisa (ngezifiso)
Ubukhulu bekhava lensimbi yephaneli
Izinto zokuvala umoya pu isangweji panel nge cam-Ilokhi
Langaphambilini I-Super Silent Diesel Generator - Uhlobo Oluthulile Generator - Xinneng
Olandelayo: Uphahla Olubekwe Monoblock Refrigeration Unit
Iyunithi Yokupholisa Igumbi Elibandayo
Amayunithi wefriji egumbi elibandayo
Izinsiza kusebenza zeCold Room Refrigeration
ICold Room Unit